Iifonti ezintathu zokufumana ubude | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iifonti ezintathu zokufumana ubude
Emva koko siya kukwazisa iifonti ezintathu zokufumana ukubhabha okwaziwa njenge Iifonti zemiqondiso yesikhululo seenqwelomoya. Kwaye ngaba indlela, ekwabizwa ngokuba yinkqubo yokubonisa, eyona njongo yayo iphambili kukunceda ekuphuhliseni iinkqubo zokuqhelanisa ezilungileyo ezinokubaluleka kokuvumela abantu ukuba bafikelele kulula kwaye ukhawuleze ukuya kwindawo ekuya kuyo kwaye nangona ibonakala ingabonakali kwiso lomntu, yinto esetyenziswa rhoqo.
Ngokuqhelekileyo Ifumaneka kwiindawo ezinkulu, ezinje, umzekelo, amaziko okuthenga, iimyuziyam, iinkampani ezinkulu kwanezikhululo zeenqwelo moya. Kule yokugqibela, ukusetyenziswa kwayo ibaluleke kakhulu ngenxa yokuhamba okukhulu kwabahambi, ukongeza kwindawo enkulu equka kunye nenani elikhulu leenkonzo abazibonelelayo.
1 Yintoni ukufumana indlela?
4 Umbono ocacileyo
Yintoni ukufumana indlela?
Ukufunyanwa kwendlela kakhulu iluncedo, ikakhulu kwi izikhululo zeenqwelo moya zamanye amazwe, apho oonobumba bahluke ngokupheleleyo kwinto abantu abaninzi abayaziyo, ke kunyanzelekile ukwazi ukukhokelwa ziimpawu kwaye kungabi ngamazwi.
Ukuba uhoya, uyakuqonda ukuba zonke izikhululo zeenqwelo moya zisebenzisa uhlobo olufanayo lwe typographic ifonti; Ukongeza ekusebenziseni iinkcukacha ezifanayo kwifayile ye- Iimpawu. Ngokwesiqhelo iifonti ezisetyenziswa rhoqo zezi: Frutiger, Helvetica kunye ne-Clearview.
Ingagxininiswa ukuba iyakwenza ingqiqo encinci sebenzisa uhlobo lwe-sans serif typeface kwaye akukho nenye kwezi sizikhankanyileyo ngasentla, kuba zihlala zilula kuzo leer ukuqiniseka umgama.
Umbhali waseSwitzerland u-Adrian Frutiger wadala ngo-1975, olu hlobo lochwethezo ikakhulu lwaluza kusetyenziswa kwisikhululo seenqwelomoya UCharles de Gaulle waseParis.
Phambi koku wayenze ngempumelelo iUniversal typeface, eyifonti evela kuhlobo lweSans Serif, kodwa wayenqwenela ukuba athathwe yingcinga "ngaphandle kwebhokisi", Oko kukuthi, wayefuna ukuphuma kwindawo yakhe yokuthuthuzela kwaye uyilo ifonti yesiko ngokupheleleyo ebonisa umoya ophawu loyilo lwangoku Isikhululo seenqwelomoya ebesinaso.
I-Frutiger luhlobo lochwethezo lwaziwa njenge Ukunyuka nokuhla okubalaseleyo, njengoko sibona kwileta "p" kunye "l", kunye nokuvalwa okuvaliweyo kancinci ngaphakathi, njengoko kubonisiwe ngokucacileyo koonobumba "n" no "e".
Ukuchaza olu hlobo lonobumba, kunokuthiwa njalo yeyona ndlela indala yokufumana umhlaba, kuba iHelvetica isondele ekubeni phakathi kwinkulungwane yobomi, ukususela kumzuzu owadalwa ngawo eSwitzerland okokuqala.
Iimpawu zeHelvetica zigqamile ngokuba zezeklasikhi, ukungathathi hlangothi kunye qhe lekile. Ngaphandle kokuba sele sinohambo olude kwilizwe elizayo, olu hlobo lohlobo lohlobo luye lwakwazi ukumelana neminyaka kwaye luhleli omncinci nowangoku.
El Injongo kaHelvetica kukwenza kube lula leer Iicatshulwa Ngaphandle kokubhidanisa oonobumba abathile, njengoko kuhlala kunjalo umzekelo no "o" kunye no "a", oku kuvumele uhlobo lohlobo lweHelvetica ukuba luphile ngempumelelo ngayo yonke le minyaka, nasemva kokuhamba kwiinkqubo ezahlukeneyo zokuyila ngokutsha.
Inendawo yokuchwetheza leyo yenziwe ukuba isetyenziswe kwi EUnited States nakwinkqubo yohola wendlela phakathi kwamashumi amabini.
Emva komsebenzi ontsonkothileyo wasentsimini, ekugqibeleni kwenzeka ukuba kufikelelwe kwisigqibo sokuba i-Clearview yayingu-typeface leyo ungafunda ngcono umgama omde. Utshintsho oluninzi lwenziwe ukuze kufundeke ngakumbi, kubandakanya ukwandiswa kwezithuba ezikhoyo phakathi konobumba omnye nolandelayo, ukongeza kubude obukhulu boonobumba abakhulu xa kuthelekiswa nonobumba omncinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti ezintathu zokufumana ubude
UDiego Rueda sitsho
Frutiger, Helvetica kunye ne-Clearview.
Phendula u-Diego Rueda
UJuan | yenza ii-icon ezikwi-Intanethi sitsho
Ukufunyanwa kwendlela ukongeza imiqondiso kwizikhululo zeenqwelo moya, kuye kwabonwa nasezibhedlele. Kwiseto esenzelwe wena kukho iindidi ezithile zeeleta. Umdibaniso wemibala enditsala ngayo ingwevu ngombala obomvu (ngwevu ngasemva).
Phendula uJuan | yenza ii-icon ezikwi-Intanethi
Uyifumana njani uyilo ukuze uprinte ngaphandle kokufa kumzamo